बाहिरबाट आउनेहरुका कारण कोरोना जोखिम बढेपछि सीमा क्षेत्रमै परीक्षण गरेर क्वारेन्टिन गर्ने तयारी – Khabar PatrikaNp
बाहिरबाट आउनेहरुका कारण कोरोना जोखिम बढेपछि सीमा क्षेत्रमै परीक्षण गरेर क्वारेन्टिन गर्ने तयारी
August 8, 2020 66
काठमाडौं। भारतलगायत विदेशबाट नेपाल फर्किनेहरुका कारण कोरोना महामारीको जोखिम बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमै परीक्षण गरेर क्वारेन्टिन गर्ने तयारीमा सरकार पुगेको छ।
सरकारले ४ महिना लामो लकडाउन यही साउन ६ गते अन्त्य गरेर केही खुकुलो पारेपछि नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु ह्वात्तै बढेको छ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ३७८ जना नयाँ कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् भने ३ जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २२५९२ पुगेको छ भने मृतकको संख्या ७३ पुगेको छ।
कोभिड–१९ महामारी व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी)का सदस्य सचिब महेन्द्र गुरागाईँले कोरोनाको जोखिम बढेकाले त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा छलफल चलिरहेको बताए।
उनले डिसी नेपालसँग भने, ‘खासमा बाहिरबाट आएकाहरुका कारण जोखिम बढेको पाइएको छ। त्यसैले सीमा क्षेत्रमै परीक्षण गरेर क्वारेन्टिन गर्नेकी भन्ने पनि छ। विदेशबाट नेपाल फर्किनेहरुलाई नआउ भन्न सकिँदैन। तर, भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढेकाले जोखिम बढेको छ।’
हाल भारतमा औसत दैनिक ५० हजार नयाँ संक्रमित फेला पर्ने गरेका छन्। गएको चैत ११ मा सरकारले नेपालमा लकडाउन घोषणा गरेपछि भारतबाट घर फर्किनेहरुको संख्या निकै बढेको थियो। पछिल्ला दिनहरुमा यसरी भारतबाट फर्किनेहरुको संख्या कम भए पनि जोखिम भने बढेको छ।
सचिब गुरागाईँले भने, ‘पहिला जति त होइन, अहिले पनि भारतबाट औसत रुपमा दैनिक एकहजार नागरिकहरु स्वदेश फर्किरहेका छन्। भारतमा जोखिम निकै बढेको छ। त्यहाँबाट आउनेहरुका कारण नेपाल पनि जोखिम बढ्नु स्वभाविकै हो।’
भारतबाट मात्र नभएर नेपालकै कोरोना संक्रमित भएका जिल्लाहरुबाट अन्य जिल्लामा जानेहरुका कारण पनि जोखिम बढेको उनको भनाई छ। काठमाडौंमा पछिल्ला दिनहरुमा जोखिम बढ्नुको कारण यही रहेको उनको भनाई छ।
पछिल्ला दिनहरुका कुनै ट्राभल हिस्ट्री नभएकाहरु पनि संक्रमित हुन थालेपछि कोरोना समूदाय स्तरमा फैलिएको आशंका गर्न थालिएको छ। सरकार भने कोरोना समूदायमा फैलिएको स्वीकार गर्न तयार छैन।
स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरु पनि धमाधम संक्रमित भइरहेका छन्। फ्रन्टलाइनमा खटिनेहरु संक्रमित हुन थालेपछि महामारीको जोखिम झनै बढेको छ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि रणनीति बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै विज्ञहरुसँग छलफल गरेका थिए। विज्ञहरुले लकडाउन फेरि लगाउने, विशेष क्षेत्रमा निषेधाज्ञा गर्ने, सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्नेलगायतका मिश्रित सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव र सीसीएमसीको सिफारिसमा आवश्यक निर्णय गरिने बताएका थिए।
तर, सो बैठकपछि सीसीएमसीको बैठक बस्न सकेको छैन। तर, विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा पनि अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवा बन्द गरिएको छ भने जोखिम भएका क्षेत्रहरु सिल्ड गरिएको छ।
शनिबार सीसीएमसीको बैठक बस्ने तयारी थियो। तर, अन्तिममा आएर बैठक स्थगित भएको छ। सचिब गुरागाईँले आवश्यक तयारी नपुगेकाले शनिबार बैठक स्थगित भएको जानकारी दिए। उनले आइतबार सीसीएमसीको बैठक बस्न सक्ने बताए। उनले अब बस्ने एमसीसीको बैठक भर्चुअल हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताए।
Prevमकैंमा पाइने फाइदा, छालादेखि आखाँसम्मलाई उपयोगी !
Nextधरानमा एन्फा क्वारेन्टाईनमा बाहिरबाट ल्याएका मानिसहरुलाई १४ दिन नपुगी जान दिएपछी कोरोना फैलने डर भएको छ
टिकटक ‘लाइभ’ गर्नेक्रममा नै पेट्रोल खनाएर आगो लगाइदिएपछि मृत्यु
आफ्नो श्री’मती भ’गाउनेको श्री’मती लिएर फरार ‘हिसाब किताब बराबर “
वास्तुशास्त्र :बाटोमा भेट्टाएको पैसाले तपाईंको भाग्य बदल्न सक्छ….
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (30097)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (25528)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (21412)
मुस्लिम अरबिक महिलालाई ग’र्लफ्रेन्ड बनाउदा काठमाण्डौमा महल बन्यो… (15265)